ဘယ်လိုအခါမှာ Lie နဲ့ Lay ပြီးတော့ Lying နဲ့ Laying တို့ကို သုံးရပါသလဲ - Myanmar Network
ဘယ်လိုအခါမှာ Lie နဲ့ Lay ပြီးတော့ Lying နဲ့ Laying တို့ကို သုံးရပါသလဲ
Posted by Soe Soe Win on May 12, 2016 at 12:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Lie ဆိုတာ intransitive verb (နောက်က objective လိုက်စရာမလိုတဲ့ verb) ဖြစ်ပြီး “လှဲလျောင်းသည်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက verb form တွေကတော့ lie (base verb) , lay (past tense), lain (past participle) နှင့် Lying (present participle) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
[လိမ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ Lie ရဲ့ verb form တွေကတော့ past tense ရော past participle ပါ lied ဖြစ်ပြီး present participle ကတော့ lying ဖြစ်ပါတယ်။]
Lay ကတော့ transitive verb ( နောက်က objective လိုက်ရတဲ့ verb ) ဖြစ်ပြီး “ထည့်သည်” “ထားသည်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက verb form တွေကတော့ Lay (base verb), Laid (past tense), Laid (past participle) နဲ့ Laying (present participle) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါစကားလုံး ၂ လုံးမှာ သီးခြားအဓိပ္ပါယ် ကိုယ်စီရှိကြပြီး တစ်ခုနေရာမှာ တစ်ခုကို လှယ်ပြီး သုံးစွဲလို့ မရပါဘူး။
Lay ဆိုတဲ့ စကားလုံးက Lie (လှဲလျောင်းသည်) ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ past tense နဲ့ စာလုံးပေါင်းတူသော်လည်းဘဲ - (ဥပမာ - He lay down foranap an hour ago..) Lay (ဒါမှမဟုတ် Laying ) ကို လှဲလျောင်းသည် ဆိုတဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ရေးသားပြောဆိုလို့ မရပါဘူး။ ဥပမာ - I will lay down foranap… / He is laying down foranap.. ဆိုတာမျိုးကို ရေးသားပြောဆိုရင် မှားပါတယ်။ စာလုံးပေါင်း ဆင်တူတာကြောင့် “လှဲလျောင်းသည်” ဆိုတဲ့( lie တို့ lying တို့အစား) lay တို့ laying တို့ကို မှားယွင်းသုံးစွဲမိကြတဲ့ မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ အမှား common error များကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Once you lay (put or place)abook on the desk, it is lying (reclining, resting) there, not laying there.
Once you lay (ချထားသည်) it is lying (လှဲနေသည်/ တင်နေသည်) laying there မဟုတ်ဘူးနော်။
When you go to Ngwe Saung beach for your vacation, you spend your time lying (not laying) on the beach.
အားလပ်ရက်မှာငွေဆောင်ကမ်းခြေကို အလည်သွားတဲ့အခါ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်ပြီး lying on the beach ဇိမ်ယူနေတယ်။ (laying မဟုတ်ဘူးနော်) အဲ…ဒါပေမဲ့ laying someone on the beach ဆိုရင်တော့ အခြား sex နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်။
You lie down on the sofa to watch TV and spend the entire evening lying there; you do not lay down on the sofa to watch TV and spend the entire evening laying there.
ဆိုဖာပေါ်မှာ lie down လှဲအိပ်ပြီး တီဗီကြည့်ကာ (lay down မဟုတ်ပါ။) တစ်ချိန်လုံး lying လှဲအိပ်နေလိုက်တယ်။ (laying မဟုတ်ပါ။)
If you see something lying on the ground, it is just resting there. (နားနေတယ်)
If you see something laying on the ground, it must be doing something else, such as laying eggs. (ဥချနေတယ်/ ဥဥနေတယ်)